Sidee ayuu Zinadine Zidane u arkay guushii uu gaaray Classico-dii ugu horeysay ee uu leyliyo Real Madrid?) – Gool FM
Sergio Ramos waxaa kaarka cas looga saaray ciyaarta wax yar ka hor goolkii Ronaldo, laakiin Madrid waxa ay ahaayeen kuwo guusha u qalmay iyadda oo xitaa si muran leh looga diiday gool uu dhaliyey Gareth Bale.
Guusha Real Madrid waxa ay soo af jartay 23 badis oo taxane u ahaa Barcelona horyaalka La Liga waxa ayna taas ka dhigan tahay in Zidane dhiniciisa ay iminka 7 dhibciid uun u jiraan hogaanka horyaalka.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay waxa ay sameeyeen ciyaaryahanada, kan ma aha garoon fudud, aad ayaan ugu faraxsanahay wax waliba, ma aha oo kaliya natiijadda,” Zidane sidaas ayuu u sheegay wariyeyaasha.
“Waa uun saddex dhibcood uu kaliya. Hada waa qasab in aan ka fikirno helida nasasho wacan iyo kulanka soo socda ee Champions League.”
Real Madrid waxa ay wajihi doonta Wolfsburg habeenka arbacadda lugta hore ee Champions League wareegiisa sideed dhamaadka, laakiin Zidane aad ayuu u faraxsanaa marka hada la eego maadama ay badiyeen El Classico.
“Marka aan sidaas arako inaga oo ah, mideysan, wax waliba u hureeyna saaxiibadeen, tababaraha taas ayaa ugu fiicab,” ayuu yiri. Wax walba oo kooxdeydda ah waan ka helay – duulanki iyo is difaaciiba. Dadaal weyn ayaan kala hor taknay dhinac ciyaaryahano aad u fiican leh.
“Bilowgeenii aad uma wacneyn laakiin waxaa fiican in aad dhib ku bilowdo oo aad si heer sare ah ku gaba gabeyso. Daafac ahaan si adag ayaan u dheelnay inaga oo ka hor tageenay ciyaaryahano halis ah.
“Waxaan haynaa dhabe noo gaar ah, diyaar garow ayaan ugu jirnaa gabo gabada ololaha. Waan la soconaa in aan wax muhiim ah ka sameyn karno Champions League.”
“Tani waxa ay noqon kareysaa meesha wax iska badali karaan. Aad ayey muhiim u tahay, ololaha inta ka dhiman, ruuxiyadeena. Waa in aan talaabada kolba mid qaadnaa. Marka hore waa in aan ka sara marno Atletico, wali kaalinta saddexaad ayaan ku jirnaa. Markaas ayaan arki doonaa waxa dhaca.
“Wali waxaa haray kulamo.”